Somaliland: Wasiirkii hore ee Maaliyadda oo Shaacisay Xadiga Lacagta ay ku Wareejinayaan Xukuumadda Cusub - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirkii hore ee Maaliyadda oo Shaacisay Xadiga Lacagta ay ku Wareejinayaan...
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Maaliyadda ee xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo, Marwo Samsam Cabdi Aadan, ayaa caddaysay inaanay wax dayn ah ku wareejinaynin madaxweynaha cusub Md. Muuse Biixi Cabdi.
Waxa kaloo ay shaacisay inay xukuumadda cusub ku wareejinayaan lacag dhan $10 milyan oo doollar oo kayd ah.
“Waxaan maqlayay maalmahan iyadoo la leeyahay dayn ayay xukuumadu wareejinaysaa, dayn ma wareejinayno. Dawladuhu dayn way wareejiyaan, oo annagaba berigii dayn ayaa nalagu wareejiyay, dayntaana waa la bixiyay oo waxba kama soo hadhin,”ayay tidhi Marwo Samsam Cabdi Aadan oo shalay warbaahinta kula hadashay magaalada Hargaysa.
“Marka dayn la wareejiyo, waa marka aan shaqaalaha dawladda mushaharkooda la bixinin. Dawladii hore lacag kaash ah oo ay cid ka qaadatay ma jirin. Laakiin, afar bilood mushaharkood oo bil walba $12 milyan oo dollar ah ayaa lagu lahaa, taasoo noqonaysa $48 milyan oo dollar.Imika-na waa 15 milyan oo dollar mushaharka shaqaalaha dawladu, haddii aanaan 4 bilood mushaharkood bixinin, iyada ayaa noqon lahayd ilaa $60 milyan oo dollar. Haddii aan shiidaaladda la bixin, haddii aan raashinadda ciidamadda la bixin, waxyaabahaasi ayaa isku noqon lahaa lacag gaadhaysa ilaa $80 milyan oo dollar ah.
Malaha taasi ayay dadweynuhu maskaxda gashadeen, waxaanan u sheegayaa mushaharkii shaqaalaha dawladda ee bishii November waa la bixiyay, cid wax dayn ah dawladda ku lehna ma jirto,” ayay tidhi Wasiirkii hore ee Maaliyaddu.
Waxa kaloo ay intaas ku dartay; “Waxaanu ku guulaysanay in miisaaniyadda danbe ee aanu samaynay, ee wasiirka cusub aanu ku wareejinayno, in aanay wasaaradda maaliyadu wax dayn ah wareejinaynin. Dayntii hore-na ay bixisay intii ugu badnayd. Iyadoo weliba lacag dheeraad ah oo loogu tallo galay in ay qorshayso dawladda cusubi, oo dhalinyaradda shaqo abuur loogu sameeyo. Lacagtaas oo dhan $10 milyan oo dollar ayaanu ugu tallo galnay miisaaniyad sanadeedka soo socda in ay kayd u ahaadaan, oo shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyaradda.”
Somaliland: Abwaan Weedhsame Oo Soo Saaray Maansadii Labadaa Ee Uu Kaga Qayb-qaadanyo Silsilad Suugaaneedii Uu Bilaabay Ee Miimley
Somalia: Al Shabaab advances in several towns in Southern Somalia
Maraykanka Oo Sheekh Cabdiqaadir Muumin Ku Dartay Liiska Argagixisada Adduunka